> Household wear>SIDE CABINET-SHORT
PUNTO Open door cabinet- Short PUNTO လွှဲတံခါးဗီရို- အသေး Size: W46.5*D40.7*H52 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၄၆.၅၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၅၂ စင်တီမီတာ
PUNTO Open door cabinet- Short PUNTO လွှဲတံခါးဗီရို- အသေး Size: W46.5*D40.7*H52 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၄၆.၅၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၅၂ စင်တီမီတာ Suitable for display in PUNTO Entertainment set or using seperately for side cabinet or bed side cabinet PUNTO ဖျော်ဖြေရေး အခြားပရိဘောဂများနှင့်အတူသော်လည်းကောင်း၊ အိပ်ယာဘေးသော်လည်းကောင်း၊ ဘေးတွဲဗီရိုငယ်သီးသန့်အဖြစ်သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။
Dimensions : 407 x 407 x 520 cm
Color : BM/BO, BM/DG, BM/OR